Ukuthengwa kwezimoto ezonakele - ukudilizwa kwemoto kwaNando Torino
Lapha ukubamba isandla kusenokubaluleka.
Il isikhungo se-autodemolizioni Da Nando iqiniso elingokoqobo neliphephile emkhakheni weukuthenga kanye nokuhoxiswa kwe izimoto ezilimele, iphahlazekile noma engasasebenzi. Nge-assortment enkulu ye izingxenye ezisele ngayinye izimoto kokwenziwe ngakunye nemodeli, kususelwa ku I-Bricherasio, isifundazwe eTurin.
Ukuthengwa Kwezimoto Ezonakalisiwe kanye neDemolition Center: UDa Nando uyafana nokwethenjwa kulo lonke elase-Italy
L'Ukuthengwa kwezimoto ezilimele, iphahlazekile noma engasasebenzi kungenye yezinsizakalo ezisebenza kahle ezinikezwa yisikhungo iminyaka I-Autodemolizioni, okungokoqobo okusekwe ngaphakathi I-Bricherasio, isifundazwe eTurin. Isikhungo se I-Autodemolizioni ngesipiliyoni seminyaka ngemuva kwayo, uDa Nando ukwazile ukukhombisa ukuthembeka okukhulu ngisho nasekuthengisweni kwe izimoto olimele, olimele noma yehle kakhulu ukuze ilungiswe.
Ukuvuselelwa kwezimoto kanye nezithuthuthu ezithwale izingozi, siyasebenza esifundazweni saseTurin.
Uma kungokwakho imoto ukhubazeke ngengozi, noma ukugqoka kwenza manje kungasizi ngalutho futhi kubiza kakhulu ukuzama ukulungiswa okusha, indlela engcono kakhulu yokuthi ungalahli imali, kodwa kunalokho ufike lapho, ukuthembela ekusebenzeni kwe ukuqoqwa kwezimoto ezilimele di Demolizioni Da Nando. Insizakalo isebenza imoto e ngesithuthuthu lwawo wonke amagama, izimoto izimoto zezentengiso, amakhumbi nazo zonke ezinye izinhlobo ze izimoto, kuphela ngokuthengisa noma ngezinjongo zokudiliza.
Car Demolition kanye Nezikhungo Zezimoto zezimoto ezinhlobonhlobo
Iyasebenza esifundazweni sonke eTurin, Isikhungo se-Auto Da Nando namuhla limelela inkomba yokubhekisela kunoma ngubani oyifunayo wasebenzisa izingxenye ezisele e izingxenye auto okusuka kumakhenikha kuye umzimba wemoto, kuya ku-elekthronikhi. Ukuhoxiswa kwe- izimoto ezilimele ihloselwe kulabo ababenayongezimoto abathinteka engozini yomgwaqo, izinhlekelele zemvelo noma abangafuni ukuhamba. Labo abakholelwa ukuthi akufanelekile ukulungisa imoto endala bangaphendukela esikhungweni ngokuzethemba okugcwele I-Autodemolizioni UNando.
Ukudilizwa kwemoto nokuthengiswa kwezinsimbi ezisetshenzisiwe nezinjini
Umsebenzi oyinhloko we Isikhungo Sezimoto UDa Nando udiliza zonke izinhlobo ze imoto, ngaphandle kwezimoto zamasosha. L'ukuthengwa kwezimoto ezilimele o iphahlazekile kuhloswe ngalo ukukhomba izingxenye e izakhi ezingathengiswa kabusha njenge wasebenzisa izingxenye ezisele. Sithola amabhulukwe agcwele ezimoto anezinkinga ezahlukahlukene kakhulu: izimoto ezilimele, izimoto ezikhungethwe yizindawo, amapaki izimoto zenkampani futhi sikhetha izingxenye ezisasebenza kahle futhi zisesimweni esifanelekile. I- Ukutakula di izimoto ezashayeka kwenzeka ngezimoto zenkampani kuphela ngokuthengisa okulandelayo noma injongo yokudiliza ngokukhanselwa kusuka e-PRA. IZIXWAYISO ZESI-XNUMX ZOKUFUNDA ATHATHA.
Ukudilizwa kwezimoto nokwesulwa kuRegista YoMphakathi
Lesi sikhungo siqhosha ngesimanje izitshalo zokudiliza okuvumela okusheshayo nokuphephile ukuklwebheka e kulahlwa wezimoto ngokukhanselwa okulandelayo okuvela I-PRA, Ukubhaliswa Komphakathi Kwezimoto, nokukhishwa kwesitifiketi esijwayelekile, ngokuhambisana nemithetho yamanje. Ukuze kuncishiswe umthelela wezemvelo wemikhiqizo etholakala ekusakazweni, u-Autodemolizioni da Nando wenza isibopho sokubuyisa impahla eningi ngangokunokwenzeka, eyabela izinkampani ezikhethekile ekuvuseleleni kabusha udoti noma ukuphakamisa wasebenzisa izingxenye ezisele ibukezwe ngokucophelela. Ukuthengwa kwe- amabhlogo ezimoto, sithenga yonke i-Italy ngokuthengiswa kwe izingxenye ezisele, ngisho online.
Ikheli: IStrada Valdomenica, 21
I-POSTAL CODE: 10060
Ucingo: 0121 598076
Umakhala ekhukhwini: 366 1451189 (Simone - Commercial)
Umakhala ekhukhwini: 333 6711007 (Nando - Management Management)
Umakhala ekhukhwini: 335 5396406 (Antonio - Warehouse)
Umakhala ekhukhwini: 339 6060462 (Michele - Ukuphathwa Kweloli)
Umakhala ekhukhwini: 338 1239556 (Annalisa - Abaphathi Abaphathi)
Inombolo ye-VAT: 08524060012